Wholesale Container Lift Mugadziri uye Mutengesi | CCMIE
Kunonyanyisa kusimudza chinzvimbo 37t ine maviri akaturikidzana
Nyorera Standard 20ft Container, 40ft mudziyo
Munguva dzemazuva ano, kune akawanda marudzi emhinduro dzekufambisa mushoko, asi chero chaunoda kutakura, uchine zvido chaizvo zvinoda mhinduro dzakaringana dzinogona kukuunzira chinhu chakakosha panguva yekuita kwako maitiro. Tichifunga nezveichi chinodikanwa, isu CCMIE neXCMG takagadzira matrailer nemakara, marori nemakireni anogona kukodzera zvaunoda, zvinoenderana nezvaunoda chaizvo uye zvinochengetedza matekinoroji epamberi nekukurumidza kugadzirisa zvaunoda. Matrailer edu nemarori zvakanyatsogadzirwa uye zvakaunganidzwa nema cranes edu, sangana nekunzvengwa kwako kwese.
Isu takazara nemutoro wekugutsa zvese zvevatengi zvemidziyo yekufambisa uye stacking zvido; tinotarisira kuzadzikiswa kunatsiridzwa zvigadzirwa zvedu nekusimudzira kukura kwevatengi 'bhizinesi vhoriyamu; uve mutengi wekupedzisira wevatengi kubatsira vatengi kuwedzera iwo mabhenefiti. China shore crane container spreader mobile port crane container kusimudza spreader kusimudza cargo kusimudza nyika, tinogamuchira vatengi nevashandisi vanobva kumativi ese epasi kuti vatibate isu nekudyidzana nemakambani ari kuuya. Zvigadzirwa zvedu ndizvo zvakanakisa, Iyo sevhisi ndeye yepamusoro-notch. Sarudzo imwe, inogara yakanaka!
Iyo yepamusoro yeChinese mudziyo wekusimudza, iyo inoshamisa mhando inotangira kubva kuhunhu kudzora kwese kwese, kugutsikana kwevatengi kunokonzerwa nekuzvipira kwedu kwechokwadi. Kuvimba nehunyanzvi hwemberi uye wakanaka mushandirapamwe weindasitiri mukurumbira, tinoita zvese zvatinogona kupa vatengi mhinduro dziri nani uye masevhisi, uye tinoda kusimbisa kuchinjana uye kubatana kwechokwadi nevatengi vekunze nekune dzimwe nyika kuti vagadzire ramangwana rakanaka.
Iyo yekushandira renji kumberi yekusimudza michina uye kumashure yekusimudza michina inofanirwa kuve yakafanana zvakafanana. Kana mutsauko mukuru ukaitika, mira chinhu chimwe chekusimudza uye shandisa chimwe chinosimudza michina, chigadzirise kuti chigadzirise michina yekumberi ndiyo yakafanana basa renji semidziyo yekusimudza kumashure, wozoishandisa panguva imwechete zvakare.
Panguva yekusimudza, ita shuwa yekusimudza chiito mushe uye wakadzikama, kana mudziyo uchizungunusa uchisimudzwa nekuda kwekukurumidza kushanda, misa kuvhiya kamwechete, tangazve kuvhiya mushure mekunyarara.
Pashure: Kurutivi Loader Rori
Zvadaro: Kuzvichengetera wega Container Trailer
Mudziyo Loading Rori
6 Layers Isina chinhu Container Reach Stacker-ZHRS100-6
Empty Mudziyo Handler-ZHD90C8
Mudziyo Side Loader
Side anosimudza masimbi
6 Marara Anosvika Stacker-ZHRS4538-6